WTTC inoda kuti kufamba kuve kwakachengeteka asi Mutungamiri Biden akabata kiyi yekudzivirira
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » WTTC inoda kuti kufamba kuve kwakachengeteka asi Mutungamiri Biden akabata kiyi yekudzivirira
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Mexico News • Kuputsa Kufamba Nhau • Caribbean • Colombia Breaking News • Kurwisa • Hurumende Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • Health News • Hotera & Resorts • LGBTQ • nhau • vanhu • Kuvakazve • chengetedzo • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
whatsapp mufananidzo 2021 04 25 pa11 56 56 2
Panguva ichangopedzwa WTTC Summit muCancun, Mexico. Pakanga pasina hurukuro yeruzhinji pamusoro penyaya ine njodzi muIndia, asi CEO Gloria Guevara akatora initative ndokubvunzurudza Manuel Santos, akasaina nevamwe 170 kuti asundire Mutungamiriri weU.S. Biden kuvhura zvirambidzo patent, zvichibvumira kuti mushonga uyu usvike nyika dzichiri kusimukira.
Apo CEO weWTTC Gloria Guevara akabvunzurudza aimbova Mutungamiriri weColombia, Juan Manuel Santos pamusangano uchangopedzwa we Tourism Summit kuCancun, vakachengeta chakavanzika chavasina kuda kuudza nyika. "Hatina kuchengeteka kusvikira munhu wese ave akachengeteka."
Kupararira kwakaipisisa kwehutachiona nemhedzisiro inouraya muIndia kwakaita kuti mhedziso yeMutungamiri weU.S. Paive nekutaura kushoma kwazvo nezveIndia muCancun, asi chokwadi ndechekuti hutachiona uhu hunofamba nekukurumidza uye kufambira mberi kwese kunoitwa kusvika parizvino pasi kungave kusingafadzi.
Mutungamiri Biden vachasimuka kumashoko avo here? Chii chichaitwa neWTTC ne 170 vekare vakuru venyika neNobel Peace Prize vakundi kuti tsamba yavo yakavhurika inzwike? Pakanga pasina mhinduro nekukurumidza neWhite House.
"Hatina kuchengetedzeka kudzamara munhu wese agara akachengeteka" yaive mhedzisiro muhurukuro yemunhu neyaimbove Mutungamiri weColombia uye akahwina Mubayiro weNobel Peace Prize, Juan Manuel Santos uye World Travel and Tourism Council CEO Gloria Guevara kuWTTC Summit kuCancun. neMuvhuro.
The World Kufamba uye Tourism Council (WTTC) uye vaimbove Mutungamiri weColombia, Juan Manuel Santos vakabata rutsigiro rwavo kumashoko eMutungamiriri weU.S. Biden sechakavanzika uye vakave nechokwadi chekuti musangano wese uyu wakagumiswa kubva pakuridza mhere. Media, kusanganisira eTurboNews, yakadzivirirwa kubva mukuwana kurekodha kwechikamu ichi chakakosha paMusangano.
Vaimbove maHead of State uye neNobel Peace Prize vanogamuchira vakadana kunaMutungamiri Biden kuti vasiye mitemo yehungwaru yezvirwere zveECOVID sekiyi yekuvhura mukana wenyika dzichiri kusimukira kuti dzigadzire kana kugamuchira majekiseni anodiwa nekukurumidza. Mutungamiri weU.S. Biden aive akarurama paakataura nezvekunzwisisa nyika ino yakabatana. Kufamba neKushanya zvinoita kuti nyika ino ibatanidzwe, uye nyika haina kuchengetedzeka kudzamara mugari wese wenyika dzese akachengeteka.
WTTC inomiririra yakazvimirira chikamu muKufamba uye Tourism nyika. Mr. Santos mutambi mukuru munharaunda yeveruzhinji. Zvichida tsamba iyi kuMutungamiri weUS haisi meseji yakazvimirira indasitiri inoda kubatanidzwa.
VaSantos vachigovana meseji yakakosha iyi, semunhu akasaina tsamba iyi kumutungamiriri weUS Biden musi waApril 14 naGloria Guevara nevamiriri kuWTTC Summit kuCancun, yakakosha uye yakakosha.
The World Tourism Network (WTN) vakaombera tsamba iyi zuva rimwe chete mushure mekunge yasainwa. “Tsamba iyi inzira yakakosha yekuti indasitiri yepasi rose yeTravel and Tourism itore danho nekutora danho mberi mukuita kuti nyika ive nzvimbo yakachengeteka munguva yedambudziko iri. Denda repasirese harifanirwe kuita kuti zvido zveindasitiri yeparma yega ive mubatsiri chete. ”
Verenga pamusoro uye tinya pane inotevera kuti uverenge tsamba izere kumutungamiriri weUS Bidid uye utarise vhidhiyo yeWTTC Summit yekutanga.